अलगपनता – सैद्धान्तिक १
कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: २ तिमोथी २:१६-१८
अलगपनताको शिक्षा आज तिरस्कृत र घृणित शिक्षा बनेको छ किनभने यो एकताको प्रचलित अवधारणा विपरित छ।
एक ताका सदर्न ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरूबाट स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरू जस्ता बाइबलीय मण्डलीहरूलाई छुट्टयाउने कुरा अलगपनता थियो भने आजको अवस्था छिटोछिटो बदलिँदै छ किनभने आज थुप्रै स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरूले अलगपनतालाई कि त सीधै इन्कार गर्दैछन् कि त त्यसलाई बेवास्ता गरी बगेर जान दिँदैछन्।
यद्यपि यो व्यापक रूपमा रद्द गरिएको र घृणा गरिएको कुरा हो, अलगपनता एक आवश्यक अभ्यास हो किनभने यो आत्मिक सुरक्षाको माध्यम हो।
मेरो आफ्‍नै ख्रीष्टिय जीवनमा मैले अलगपनता तीन चरणहरूमा सिकेँ: पहिलो, सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले जाँच्नुपर्छ र झूटा शिक्षाको बारेमा सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई एक नयाँ ख्रीष्टियन हुँदा सिकाइएको थियो। मलाई ख्रीष्टमा ल्याउने व्यक्तिले १ थेस्सलोनिकी ५:२१ जस्ता पदहरू सिकाए। उनले मलाई एउटा ख्रीष्टिय पुस्तक पसलमा लगेर ख्रीष्टिय पुस्तकहरू छान्दा धेरै होशियार हुनुपर्छ किनकि थुप्रै त्यस्ता पुस्तकहरूले मलाई गलत दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने कुराको चेतावनी दिए। दोस्रो, मैले एक स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट बाइबल कलेजमा अलगपनता सिकेँ। त्यहाँ मैले रोमन क्याथोलिकवाद, उदारवादी ईश्वरशास्त्र, क्यारिज्मेटिकवाद, नव‍-इभान्जेलिकलवाद र ख्रीष्टिय रक जस्ता झूटा शिक्षा तथा आधुनिक लहरहरूको खतराको बारेमा केही कुरा सिकेँ। तेस्रो, व्यावहारिक तहमा म एक जवान मिसनरी हुँदा नेपाल ख्रीष्टियन फेलोशिप (Nepal Christian Fellowship) सितको मेरा अनुभवहरूमा मैले अलगपनता सिकेँ। योचाहिँ एउटा एकतावादी‍‍-क्यारिजमेटिक सङ्गती थियो र प्रचार गर्न र विभिन्न अवसरहरूमा सिकाउन उनीहरूबाट पाएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मैले उनीहरूलाई मदत गर्न सक्छु र सायद उनीहरूलाई परिवर्तन गराउन पनि सक्छु भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर त्यसको सट्टा शिक्षागत सङ्घर्ष (doctrinal conflict) ले गर्दा यसको नतीजा केवल समस्या र गडबडी थियो। मैले यो सिकेँ कि झूटा शिक्षकहरू र सम्झौतावादीहरूबाट अलग हुनु र भित्र रहेर होइन बरु बाहिरबाट उनीहरूलाई मदत गर्न खोज्नु नै बाइबलीय र बुद्धिमानी कुरा हो।
२ तिमोथी २:१५-१६
अलगपनताको जग (२ तिमोथी २:१५)
पहिलो, अलगपनताको जग भनेको बाइबलको ठोस ज्ञान हो। यो बिना कुनै पनि ख्रीष्टियनले सत्य र असत्यलाई छुट्ट्याउन सक्दैन। यसको मतलब प्रत्येक विश्वासी परिश्रमसाथ बाइबल अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्छ। दैनिक बाइबल अध्ययनको बानी बसाल्नु अति महत्त्वपूर्ण छ। साथै यसको मतलब हरेक मण्डली परमेश्वरका जनहरूलाई पवित्र शास्त्रहरूमा तालिम दिइरहने बाइबल पाठशाला हुनुपर्छ र प्रभावकारी रूपमा झूटा शिक्षाको सामना गर्न तयार बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, अलगपनताको जग भनेको एक जाँच गर्ने मनस्थिति हो। परमेश्वरको वचनलाई ठीक-ठीकसँग छुट्ट्याउनु भनेको सत्य र असत्यको बीचमा निरन्तर भिन्नता राख्‍नु हो। हेर्नुहोस् भजनसङ्ग्रह ११९:१२८; हितोपदेश १४:१५; प्रेरित १७:११; १ थेस्सलोनिकी ५:२१।
अलपनताको तरिका (२ तिमोथी २:१६,१७)
असत्य मार्ग अपनाउनेहरूलाई प्रस्टै चिनाउनुपर्छ (२ तिमोथी २:१७)
पावलले साधारण रूपमा अस्पष्ट चेतावनी दिएनन्। १ र २ तिमोथीमा मात्र उनले झूटा शिक्षकहरू र सम्झौतावादीका नामहरू १० पटक तोकेर उल्लेख गरे (१ तिमोथी १:२०; २ तिमोथी १:१५; २:१७; ३:८; ४:१०,१४)।
यो महत्त्वपूर्ण अभ्यास आज मण्डलीहरूमा प्रायः पाउन सकिन्न, “आधारभूतवादी” (fundamentalist) नाम लिन नछोडेकाहरूमा समेत। मानिसहरूलाई जानकार राख्न र पूर्वचेतावनी दिन मण्डलीहरूले “ओ तिमोथी” (O Timothy) पत्रिका र “फ्राइडे चर्च न्यूज नोट्स” (Friday Church News Notes) जस्ता प्रकाशनहरूमा पाइने जानकारी तथा चेतावनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। मण्डलीहरू “डिफेन्स अफ दि फेथ” (Defense of the Faith) जस्ता अध्ययन मालाहरूमा आधारित तालिमहरू दिनुपर्छ। आफ्‍ना जनहरूलाई खाँटी पठन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन मण्डलीहरूले आफ्‍नै किताब पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ। पुरानो मार्गहरूमा स्थिर भएर उभिरहने मण्डलीहरूले प्रायः यी तीनओटै कामहरू गरिरहेका छन्।
असत्य मार्ग अपनाउनेहरूदेखि अलग हुनुपर्छ (“त्याग”, २ तिमोथी २:१६; “तिनीहरूबाट टाढा बस”, २ तिमोथी ३:५, “यस्ताहरूबाट पर बस”)।
उनीहरूका मण्डलीहरू र सभाहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। कुनै मण्डलीले गलत कुरा सिकाउँदछ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छ भने, त्यसबाट टाढा बस्नुहोस्। कुनै प्रचारकले गलत कुरा सिकाउँछ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छ भने उसको सभामा नजानुहोस्। धेरैजना व्यक्तिहरू प्रमीस किपर सभा वा क्यारिज्मेटिक बाइबल अध्ययन वा ख्रीष्टिय रक कन्सर्टमा गएका छन् र यसरी परमेश्वरको अलगपनताको आज्ञालाई अवज्ञा गरेको हुनाले उनीहरू गलत मार्ग अपनाउनलाई परिवर्तित भएका छन्।
उनीहरूका पुस्तकहरू, वेबसाइटहरू, टिभी र रेडियो प्रसारणहरू, एमपीथ्री प्रवचनहरूबाट अलग बस्नुहोस्। यसो गर्न विफल हुनु नै स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरूभित्र क्याल्भिनवाद र नवइभान्जेलिकलवाद बेजोडसित छिर्न पाउनुको मुख्य कारण हो। केही वर्ष अगाडि मिशिगनका एकजना पास्टरले मलाई भने कि उनीहरूका सबभन्दा कमजोर र अस्थिर मण्डली सदस्यहरू चाहिँ सबभन्दा बढी मात्रामा ख्रीष्टिय रेडियो सुन्नेहरू हुन्। यसको कारण यो हो कि “इभान्जेलिकल” स्टेशनका कार्यक्रमहरू समेत प्रायः झूटा शिक्षकहरू र सम्झौतावादीहरूले भरिएका हुन्छन्। वे अफ लाइफ लिटरेचरको वेबसाइटमा भएको “ख्रीष्टिय पुस्तक पसलका खतराहरू” (Dangers in Christian Bookstores) र “ख्रीष्टिय रेडियोका खतराहरू” (Dangers on Christian Radio) मा थुप्रै लेखकहरू र रेडियो व्यक्तित्वहरू सूचीत गरिएका छन् जसबाट पर बस्नुपर्छ। (यसमा समावेश छन्: बिल्ली र फ्रान्क्लीन ग्राहाम, रिक वारेन, चक कोल्सन, चक स्वीन्डोल, जीम सिम्बला, फिलिप यान्सी, जोन म्याक्स्वेल, म्याक्स लुकाडो, एलेजाबेथ एलिअट, जेरी ब्रीजेज, ज्याक हेफोर्ड, बील हाइबेल्स, जेम्स डब्सन, रबर्ट शूलर, केन ब्लान्चार्ड, रिचार्ड फस्टर, डालस वीलार्ड, रबर्ट वेबर, जोन माइकल ट्यालबट, सीएस लुइस, नर्मन भिन्सेन्ट पील, ब्रुस विल्किन्सन्, रब बेल, ब्रेनन म्यानिङ्ग, टोनी कम्पोलो, डोनाल्ड मिलर, अरवीन म्याकम्यानस र ब्रायन म्याकलारेन।)
उनीहरूका बाइबल स्कूलहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। न्यू इभान्जेलिकलवाद र मडर्न टेक्स्चूवल क्रिटिसिज्म जस्ता कुराहरू आधारभूत बाइबलीय मण्डलीहरूमा डालस थिअलजिकल सेमिनरी जस्ता न्यू इभान्जेलिकल अध्यापन केन्द्रहरूबाट पनि छिरिरहेका छन्।
अलगपनताको कारण (२ तिमोथी २:१६ख, १७)
यो बुझ्नुपर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण बुँदा हो।
क) असत्यद्वारा भ्रष्ट नबन्नका लागि हामीले अलगपनताको अभ्यास गर्नुपर्छ (“सड्ने घाउले झैं खाँदै लैजानेछ”)। सडेको स्याउहरूको बीचमा राख्दा राम्रो स्याउले तिनीहरूको स्वस्थ्यलाई वृद्धि गर्दैन! दाँज्नुहोस् १ कोरिन्थी १५:३३।
नव-इभान्जेलिकलवादको उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। सन् १९५० को दशक ताका बिल्ली ग्राहाम जस्ता इभान्जेलिकल अगुवाहरूले अलगपनतालाई परित्याग गरे। नव-इभान्जेलिकलवादका शुरुका एक अगुवा हारोल्ड लिन्डसेल (Harold Lindsell) ले पछिबाट स्वीकार गरे, “एक दशक जति भित्रमा नव-इभान्जेलिकलवाद आफू भित्रबाटै बाइबल त्रुटीरहित छ वा अमोघ छ भन्ने मान्यताको सवालमा बढ्दो शङ्का-उपशङ्काद्वारा ग्रस्त हुन थालिसकेको थियो” (Lindsell, Bible in the Balance, 1979)।
ज्याक भ्यान इम्पी (Jack van Impe) को उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। सन् १९७० को दशकमा तिनी एक आधारभूतवादी थिए तर १९८० को दशकमा तिनले आफ्‍नो अडान बदले। सन् १९८४ मा उनले Heart Disease in Christ’s Body भन्ने पुस्तक निकाले जसमा उनले अलगपनतावादको विरुद्धमा लेखे र एकतावादी अवधारणालाई अघि सारे। उनले भने, “परमेश्वर क्याथोलिकहरू, लूथरनहरू, ब्याप्टिष्टहरू र पेन्टेकोस्टलहरूका हृदयभित्र आउनुहुन्छ, र यसरी परमेश्वर हामीभित्र हुनुभएकोले हामी एकअर्कासित सङ्गती गर्न सक्छौं।” सन् १९९० को दशक आइपुग्दा सम्म भ्यान इम्पीले पोपको प्रशंसा गर्न थालिसकेका थिए। उनले Startling Revelations: Pope John Paul II नाकम भिडियो प्रकाशित गरे जसमा उनले पोपलाई ख्रीष्टिय विश्वासको हिरोको रूपमा उचाले! यति छोटो समयमा नै उनी यहाँसम्म आत्मिक अन्धा हुन पुगे।
जेम्स रबिन्सन (James Robinson) को उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। उनी १९७० को दशकमा एक साहसी सदर्न ब्याप्टिष्ट प्रचारक थिए जसले उदारवाद (liberalism) र सांसारिकपन (worldliness) को विरुद्धमा प्रचार गर्दथे। तर १९८० मा उनी एक क्यारिज्मेटिक बने र आफू “नकारात्मकवाद” बाट उन्मुक्त भएको दाबी गरे! सन् १९८७ मा न्यू ओर्लियन्समा एक विशाल एक्यूमेनिकल क्यारिज्मेटिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले पोपकै प्रशंसा गर्दैथिए! म एक पत्रकारको हैसियतले त्यहीँ उपस्थित थिएँ र उनले यसो भनेको मैले सुनेँ, “म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले यस पृथ्वीमा नैतिकताको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रतिनिधिहरूमध्येमा एकजना पोप हुनुहुन्छ। यो जान्ने व्यक्तिहरूले उनी एक नयाँ जन्म पाएका व्यक्ति हुन् भन्ने साँच्ची नै विश्वास गर्दछन्।”
ख) अरूहरूलाई ठेस नखुवाउन हामीले अलगपनताको अभ्यास गर्नुपर्छ (१ कोरिन्थी ८:९-१३)।
आफूलाई जहाँ‍‍-जहाँबाट निमन्त्रणा आउँछ त्यहाँ-त्यहाँ गएर प्रचार गर्ने बिल्ली ग्राहामको अवधारणा हो, तर उनले रोमन क्याथोलिक र उदारवादी प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीहरूमा गई प्रचार गरेर गलत उदाहरण देखाएका छन्। पोल्याण्डमा उनले क्याथोलिक मण्डलीहरूमा प्रचार गरे, अझ ब्लाक मडोन्ना नाम गरेको मरियमको मुख्य थानको बाहिर उभिएर आगन्तुकहरूलाई अभिवादन गरे। यस घटनाको तस्वीर छापिएको “डीसीजन” (Decision) पत्रिकाको एक प्रति मसितै छ। क्याथोलिक मण्डलीहरूमा प्रचार गर्ने ग्राहामको अभ्यासले उनले रोमन क्याथोलिक मण्डलीलाई आफूले स्वीकार गर्दछु भन्ने र त्यसमा लागिरहनु राम्रै कुरा हो भन्ने सन्देश दिएका छन्। यो कति भयङ्कर गलत सन्देश हो! बिल्ली ग्राहाम, फ्रान्क्लिन ग्राहाम, लुइस पलाउ लगायत अनगिन्ती अन्य एक्यूमेनिकल प्रचारकहरूले बाइबलको आज्ञा पालन नगरीकन झूटा शिक्षकहरूदेखि अलग बस्न अस्वीकार गरेकाले कति करोडौं व्यक्तिहरू झूटा मण्डलीहरूमा लागिरहन प्रोत्साहन पाए भन्ने कुरा प्रभु मात्र जान्नुहुन्छ।
ग) परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई हामीले अलगपनताको अभ्यास गर्नुपर्छ!
अलगपनताको अभ्यास नगर्नलाई ख्रीष्टियनहरूले थुप्रै बाहनाहरू बनाउँछन् तर ठीक गर्छु भन्ने उद्देश्यले बेठीक गर्नु कहिल्यै ठीक होइन! मण्डलीहरूमा र गाउँहरूमा प्रचार गर्नलाई मेरी श्रीमतीले निमन्त्रणा पाएकी छिन्, तर उनले जहिले पनि इन्कार गरेकी छिन् किनकि परमेश्वरले उनलाई त्यसो गर्न मनाही गर्नुभएको छ (१ तिमोथी २:१२)। उनेल सजिलै भन्न सक्थिन्, “तर यतिखेर प्रचार गर्ने पुरुषहरू छैनन् र कोही न कोहीले प्रचार त गर्नैपर्छ।” तर ठीक गर्छु भन्ने उद्देश्यले बेठीक गर्नु कहिल्यै ठीक होइन!
अलगपनता – सैद्धान्तिक भाग १ सम्बन्धी पुनरावलोकन प्रश्नहरू
अलगपनताको जग के हो?
विश्वासीलाई जाँच गर्ने मनस्थिति धारण गर्न सिकाउने चारओटा पदहरू कुन-कुन हुन्?
अलगपनताको तरिकामा कुन दुई कुराहरू पर्दछन्?
तिमोथीलाई आफ्‍ना पत्रहरूमा पावलले कति पटक झूटा शिक्षकहरूको नाम तोकेर लेखे?
अलगपनताको तरिकालाई बाइबलले कुन तीन तरिकामा बयान गरेको छ?
कुनै पनि झूटा शिक्षा सिकाइने मण्डली वा बाइबल अध्ययन वा सम्मेलनमा भाग लिन एक विश्वासी जनले किन इन्कार गर्नुपर्छ?
कुनचाहिँ रेडियो कार्यक्रम सुन्ने वा कुन पुस्तक पढ्ने बारेमा विश्वासीहरू किन होशियार हुनुपर्छ?
हामीले अलगपनताको अभ्यास गर्नुपर्ने तीनओटा कारणहरू के-के हुन्?
ज्याक भ्यान इम्पीले १९८४ मा कुन कुराको विरोध गरे?
झूटा मण्डलीहरूमा प्रचार गर्दा एक्यूमेनिकल प्रचारकहरूले कुन सन्देश दिइरहेका हुन्छन्?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 11:30:322020-11-15 15:24:15अलगपनता – सैद्धान्तिक १
बाबुआमा तथा शिक्षकहरूले युवाहरूलाई मनोरञ्जनसित सरोकार राख्‍ने बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई सिकाउनुपर्छ। मानिस परमेश्वरको सृष्टिमा आनन्द गरोस् भनेर ऊ बनाइएको हो। परमेश्वरले “हाम्रा आनन्दका निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ” (१ तिमोथी ६:१७)। तर सृष्टिको पतन हुन गयो र त्यसमा थुप्रै आत्मिक खतराहरू रहेका छन् (१ पत्रुस ५:८)। कतिपय क्रियाकलापहरू आफैमा बाइबल विपरित नहोलान् तर तिनमा समेत कति त फाइदा नदिने कुराहरू हुन्छन् (१ कोरिन्थी ६:१२)। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा ती कुराहरूलाई परीक्षण गर्न सिक्नुपर्छ ताकि हामी बुद्धिका साथ हिँड्न सकौं, मूर्खतामा होइन।
युवाहरूलाई केवल “यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन” मात्र भनेर गर्न हुने र नहुने कुराहरूको एउटा सूची दिएर मात्र हुन्न। उनीहरूलाई हामीले ध्यानपूर्वक र धैर्यपूर्वक परमेश्वरको वचन व्यावहारिक किसिमले सिकाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले ती वचनका पाठहरू दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न जान्न सकून्।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 11:28:242020-11-14 16:37:27मनोरञ्जनको परीक्षण